Yaared Shumatee: Imala sabummaa waraqaa eenyummaa irraa haqsiisuu - BBC News Afaan Oromoo
Yaared Shumatee: Imala sabummaa waraqaa eenyummaa irraa haqsiisuu
Goodayyaa suuraa Sabummaan waraqaa eenyummaa koo irratti akka eeramu hin fedhu
Walitti bu'iinsa tibbana naannolee Oromiyaa fi Somaalee gidduutti uumameen, dhimmi waraqaa eenyummaa irratti sabummaan ibsamuu qabamoo hin qabu jedhu ijoo dubbii ta'ee tureera.
Sabummaa waraqaa eenyummaa irratti barreessuun ega eegalamee waggootni 26 darbaniiru.
Mormiiwwan tibbana ka'an keessaa muraasni kan namoota saba lama irraa dhalatanii saba tokko akka filataniif dirqamanii fi sabummaan nama dhuunfaas ta'e hawaasa tokko ibsuu hin danda'u jedhanii yaadanin kan dhiyaate dha.
Faallaa kanaatiin ammo sabummaan eenyummaa isaanii wan ibsuuf waraqaa eenyummaa irratti eeramuu akka qabu namootni cimsanii mormanis jiru.
Ogeessa fiilmii kan ta'e Yaared Shumatee, bakka sabummaa anaaf Itoophiyaa kan jedhu qofti gahaa dha jedha.
Yaared akkuma lammii biyyatti hundaa, guca barbaachisu guutee waraqaa eenyummaa erga fudhatee bubbuleera.
Ta'us mana baankii fi bakkee birootti waraqaa eenyummaa isaatti wayita fayyadamu dhimmi sabummaa achirratti eeramuun kun isa jeeqaa akka ture BBCtti hime.
Kanaafis jecha yeroo mara waraqaa hayyama konkolaachisummaa fi Paaspoortii isaa fayyadama.
Goodayyaa suuraa Itoophiyummaa faarsuu caalaa saba irratti xiyyeeffachuun cimaa dhufeera
Saba jechumti jedhuyyuu biyya ibsa malee akka amma biyyattiin dhimmi itti bahaa jirtu sabummaa hin ibsu yaada jedhus qaba.
"Namoonni akkaataa sabummaa isaaniitiin of gurmeessan baay'achuun isaanii sabboonummaa Itoophiyaa dadhabsiiseera." Itoophiyummaa faarsuu caalaa saba irratti xiyyeeffachuun cimaa dhufeera." Jedha.
Namootni yaada Yaareediin wal faallessu qaban, Itoophiyaan biyya sabootni eenyummaa gara garaa qaban keessa jiraatan malee eenyummaa miti.
Itoophiyaan nama sabummaan isaa waraqaa eenyummaa irratti akka barraa'u fedhuuf akka Lammummaatti, kaaniif ammoo akka sabummaatti yoo kenname lammiilee biyyatti gidduutti sadarkaa waan uumuuf bakka sabaatti Itoophiyaa jedhamuun sirrii miti yaada jedhu qabu.
"Namootni sabummaan isaanii waraqaa eenyummaa irratti akka eeramu barbaadan haa barraa'uuf, ana dabalatee namoota wanti nun ibsine waraqaa eenyummaa keenya irratti akka eeramu hin barbaadneef garuu mirgi heerri mootummaa nuuf keenne nuuf kabajamuu qaba," jedha Yaared.
Gaaffii kana qabatee ji'oota 8 dura gara ganda magaalaa Finfinnee keessaa jiraatu akka deemee fi "yookan kan abbaa kee yookan kan haadha kee filadhu malee, sabummaa Itoophiyaa jennee siif kennuuf qajeelfamni hin hayyamu" deebii jedhu argachuu isaa BBCtti himeera.
Gaaffiidhuma kana qabatee gara kutaa bulchiinsa magaalaa deemus deebiin waluma fakkaataa dha.
Qajeelfamicha kan kenne waajjira galmeessa ragaalee bulchiinsa magaalaa finfinnee akka ta'eefi haquu kan danda'u garuu mana murtii qofa akka ta'e kan itti himame Yaareed, Mana murtii bulchiinsa kutaa magaalaa deeme.
Manni murtii bulchiinsa kutaa magaalaa gara mana murtii olaanaatti, manni murtii olaanaa ammoo gara mana murtii federaalaatti, Manni murtii Federaalaas ati dhimmi mirga heera mootummaa gaafatte jechuun gara mana maree Federeeshiniitti akka isa erge BBC'f himee jira.
Gidduutti sababoota gara garaan adda kutee akka tureefi himannaa isaa gara mana maree Federeeshinii geessuuf qophii irra akka jiru himeera.